Tag: samatabbixin | Martech Zone
U dirida emaylka sanduuqa sanduuqa waxay sii ahaaneysaa geeddi-socod jahwareer u leh ganacsiyada sharciga ah maaddaama kuwa wax basaasa ay sii wadaan xadgudubka iyo dhaawaca warshadaha. Sababtoo ah way fududahay oo waa qaali tahay in la diro emayl, spamersku waxay si fudud uga boodayaan adeegga illaa adeegga, ama xitaa qoraal ay iyaguba ka diraan server ilaa server. Bixiyeyaasha adeegga internetka (ISPs) waxaa lagu qasbay inay xaqiijiyaan soo diraha, dhisaan sumcad ku saabsan dirista cinwaanada IP-ga iyo cinwaanada, iyo sidoo kale inay hubiyaan mid kasta
7 Sababood Oo Loo Nadiifiyo Liiska Emailkaaga Iyo Sida Looga Saaro Macaamiisha
Isniin, Maarso 19, 2018 Khamiista, Sebtember 24, 2020 Douglas Karr
Waxaan diiradda saareynaa suuqgeynta emaylka dhawaanahan sababtoo ah waxaan runtii ku aragnaa dhibaatooyin badan oo ka jira warshadan. Haddii hawl-wadeenku sii wado inuu kugu cadaadiyo koritaanka liiska emailkaaga, waxaad runtii u baahan tahay inaad ku tilmaamto qodobkan. Xaqiiqdu waxay tahay, ka weyn iyo ka sii weyn liiska emailkaaga, waxyeelada ugu badan ee ay u yeelan karto emaylkaaga wax ku oolka suuqgeynta. Waa inaad, halkii, diiradda saareysaa inta macaamiil firfircoon ee aad ku leedahay adiga
Markaad eegto ololeyaasha emaylkaaga, waxaa jira tiro cabbirro ah oo aad u baahan tahay inaad diiradda saarto si aad u hagaajiso waxqabadka suuqgeynta emailkaaga guud. Dabeecadaha emaylka iyo teknoolojiyada ayaa isbeddelay waqti ka dib - markaa hubi inaad cusbooneysiiso habka aad ula socoto waxqabadka emaylkaaga. Waagii hore, waxaan sidoo kale la wadaagnay qaar ka mid ah qaaciidooyinka ka dambeeya cabbiraadaha emaylka muhiimka ah. Meelaynta Sanduuqa - iska ilaalinta faylalka SPAM iyo miirayaasha qashinka waa in lala socdaa haddii